သန့်ရှင်းရေးသုံး Pad၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Diaper၊ Under Pad - JIEYA
1. အတွင်းအလွှာ- Hydrophile Non-Woven
2. စုပ်ယူမှု- တင်သွင်းထားသော ပျော့ဖတ်၊ တစ်ရှူးစက္ကူ၊ SAP
3. Stopper- ကော်တိပ်၊ ရှေ့တိပ်၊ Magic
4. နောက်ကျောစာရွက်- ရေစိုခံ PE Back Layer
5. အခြား: Leak guard၊ADL၊Fabric Glue စသည်ဖြင့်
6.Ultra Thin နှင့် Ultra Thick နှစ်မျိုးလုံး ဖြစ်နိုင်သည်။
လူကြီး Pant Diaper
1.Super absorbency အလွှာ။
2. ပျော့ပျောင်းပြီး လန်းဆန်းစေသော nonwoven မျက်နှာပြင်။
3.3D ယိုစိမ့်မှု အထောက်အထား။
4. အဖွင့်အပိတ် ဝတ်ဆင်ရလွယ်ကူခြင်း။
5.Ultra Thin နှင့် Ultra Thick နှစ်မျိုးလုံး ဖြစ်နိုင်သည်။
2. အလွန်နူးညံ့သောမျက်နှာပြင် OR OEM သင့်လိုဂို
Anion Cotton ၊
Lady Sanitary Panties ၊
ဈေးနှုန်းချိုသာသော အရည်အသွေးမြင့် သဘာဝ သန့်စင်ဆေးရည်...
စက်ရုံထုတ်စျေးနှုန်းဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် သန့်ရှင်းရေးသုံး လက်သုတ်ပုဝါ...
အရည်အသွေးမြင့် သန့်ရှင်းသော လက်သုတ်ပဝါ နမူနာ Cotton Cust...
အရည်အသွေးမြင့် တခါသုံး ယက်မဟုတ်သော အထည်များ...
တရုတ်စက်ရုံမှ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့် ခွေးသုံးပစ္စည်းများ တခါသုံး...
Baby Safety Cotton Super Dry Surface High Absor...
အရောင်းရဆုံး တစ်ခါသုံး Lady Maxi Woman Pad San...
အရည်အသွေးမြင့် တစ်ခါသုံး အရွယ်ရောက်ပြီးသော အနှီးဆွဲအိတ်...
အဲဒါက ... ဖြစ်တယ်အချိန်.
Tianjin Jieya အမျိုးသမီးတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန် Co., Ltd.found@1996 တွင် သန့်ရှင်းရေးအကူများ(လက်သုတ်ပုဝါများ)၊ panty liner ၊ menstrual panty ၊adult diapers ၊adult pants diaper(adult pull up diaper) ၊ underpad နှင့် pet pad တို့ဖြင့် ISO နှင့် CE လက်မှတ်ရရှိထားသော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖုံးများ။
၎င်းသည် Tianbao စက်မှုပန်းခြံ၊ Baodi ခရိုင်၊ Tianjin၊ CHINA တွင်တည်ရှိပြီး သန့်ရှင်းရေးသုံးလက်သုတ်ပုဝါ4ခု၊ pantyliner 1 ၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအနှီး 1 ၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူဘောင်းဘီ 1 နှင့် underpad (pet pad) အပါအဝင်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 8 ခုရှိသည်။
နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ သို့မဟုတ် ရက်ချိန်းယူပါ။
Sanitary Pad 245mm, Female Sanitary Pad, Negative Ion Sanitary Napkin, Soft Women Sanitary Towel, Lady Pads, Cotton Sanitary Pad,